နည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်း: သိုလှောင် / MAM ကို NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » နည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်း: သိုလှောင်မှု / ပေးခဲ့သည်
နည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်း: သိုလှောင်မှု / ပေးခဲ့သည်
Namdev Lisman, အမှုဆောင်ဒုသမ္မတ, Primestream
သိုလှောင်မှုကိုသငျသညျတဖနျလိုအပျသညျအထိပစ္စည်းပစ္စယမှအပေါ်ကိုင်ထား၏လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်တယ်, ဒီအမှန်တရားအတွက်တစ်ဦးကို un-ပြောင်းလဲမှုနှင့်ငြိမ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တူပုံပေါ်စေခြင်းငှါစဉ်ကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းတီထွင်ဆန်းသစ်နဲ့ content ဖန်တီးသူဟာသူတို့ရဲ့ Workflows တိုးတက်စောင့်ရှောက်တတ်၏။ အဆိုပါရလဒ်ကြောင့်သိုလှောင်မှုသည်နှင့်သင်သည်အဘယ်သို့ကနေလိုခငျြတဲ့ရွေ့လျားပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တိုးတက်လာသောယုံကြည်စိတ်ချရအမြန်နှုန်းနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်အတူ On-ရဝုဏ်သိုလှောငျရှေးခယျြစရာဘို့တိုးတက်လာသောသိပ်သည်းဆတစ်သံသရာမြင်ကြပြီ။ နည်းပညာတိုးတက်ဆက်လက်အတိုင်းကျနော်တို့ကစက်မှုလုပ်ငန်း digitizing နဲ့စတင်ပြီးစပိုင်းတွင်အနည်းငယ်အဆင့်တဆင့်ကိုသွား, ပြီးတော့နည်းပညာကိုရှေ့ကိုပြောင်းရွေ့ထားပြီးအဖြစ်အသစ်သောမီဒီယာနှင့်စနစ်များပေါ်သို့ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်း၏မြင်ကြပြီ။ ကျနော်တို့အခုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်ပတ်လည်ပြဿနာများအားလုံးနှင့်အတူ, physical layer သည်ဖောက်သည်ထံမှ abstracted သည်အဘယ်မှာရှိမိုဃ်းတိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဒေတာကိုမြင်နေရသည်။ အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူအားမျှထောက်ပြနိုင်ပါတယ်တဲ့အရပျ၌နထေိုငျသောအသိုလှောင်ရာဝထ္ထုတစ်ခုထုတ်လုပ်သူရဲ့စားပွဲခုံအောက်မှဖြစ်ကြောင်းတိပ်ခွေသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်တစ် box ထဲကပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
cloud-based ဖြေရှင်းချက်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဝေးတဲ့ဝေးနေမြဲနေစဉ်အသစ် Workflows 100% ရရှိနိုင်မှု, ချက်ချင်း access ကို, ရှာနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်အသစ်သောဝင်ငွေစီးကိုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုမျှော်လင့်ကြောင်း Workflows သို့ဤအကြောင်းအရာချည်နေကြသည်။ သိမ်းဆည်းထားခံရမီဒီယာသူ့ဟာသူမလုံလောကျနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ မီဒီယာပတ်လည် metadata ကိုလက်လှမ်းဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် metadata ကိုရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများ, အသုံးပြုမှုမှတစုံတခုရှိနိုင်ပါသည်, မှတ်တမ်း AI အအထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးအချက်အလက်နှင့်မြင့်မားသော resolution ကိုမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်သို့ပြောင်းရွေ့နေစဉ်ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်သော proxy များဝင်ရောက်ခွင့် generated ။
ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်တစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ် မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) သင်ယခုအချိန်တွင်အတွက်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသာမသိကြောင်းဖြေရှင်းချက်ပေမယ်သင်သည်အဘယ်သို့အတိတ်ကာလပွုပါပွီ။ တကယ်တော့ခုနှစ်, ပေးခဲ့သည်, ဖမ်းယူထုတ်လုပ်မန်နေဂျင်းနှင့်မီဒီယာပို့ဆောင်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါပေးခဲ့သည်ပဲအချက်အလက်တွေကိုနောက်ကွယ်ကဆက်စပ်နားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဦးတည်းမှသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်ကိုင်ထားနိုင်မယ့် tool တစ်ခုကနေတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့လိုက်ပါတယ်။
ယနေ့ချောမွေ့စွာလုပ်ကိုင်ဖို့တစ်ပေးခဲ့သည်ဘို့ကနောက်ခံသိုလှောင်မှုအတွက်မွေးရာပါစွမ်းရည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ မီဒီယာအသုံးပြုသူများကုန်ထုတ်စွမ်းအားသစ်တွေအဆင့်ဆင့်ကယ်နှုတ်တော်မူကြောင်း Workflows ကယ်နှုတ်ကလုပ်ချင်သောအရာကိုဆန့်ကျင် factored ခံရဖို့လိုအပ်ချက်နေထိုင်ဘယ်မှာမှအဖြေ။ အဆိုပါပေးခဲ့သည်ကိုလည်းအနာဂတ်တွင်အသစ်သောနည်းလမ်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ဒါမှမဟုတ်အခါလိုအပ်ချက်များကိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားဆက်ပြီးနေစဉ်ဖောက်သည်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းအသွားအလာတလျှောက်လုံးပဋိပက္ခများနှင့်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ မီဒီယာ၏အပိုင်းအစတစ်ရိုးရှင်းရှာဖွေရေးကသင်လိုချင်သောသို့မဟုတ်မမီဒီယာရှိမရှိသင်ပြောပြရန် metadata ကိုတစ်ဦး thumbnail ကိုများနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကယ်မနှုတ်နိုင်။ သင်သည်အဘယ်သို့ဖြစ်ကြပြီးပိုပြီးရှိရာ, သင်ပြုချင်သောအရာကိုမူတည်ပြီးမှလာမယ့်လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာတယ်။
သငျသညျမီဒီယာအသုံးပြုချင်နှင့်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် Co-တည်ရှိသည်လျှင်, အပေါငျးတို့သပေးခဲ့သည်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်မီဒီယာမှသငျသှားချွတ်သင်သည်ထောက်ပြသည်။ သို့သော်; သငျသညျတစျဦး၏တည်နေရာနှင့်မီဒီယာမှာမှန်လျှင်မိုဃ်းတိမ်၌မော်ကွန်းတင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်စက္ကန့်တည်နေရာမှာ, ထို့နောက်ပေးခဲ့သည်သင်သည်ဖြစ်ပျက်ဖို့လိုအပ်သောအရာကိုကိုထောက်ပံ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအစုတခုနောက်ကိုလိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဒေသအလိုက်မီဒီယာရွှေ့ချင်ပါသလား? သင်တစ်ဦး proxy ကိုဗားရှင်းချင်ပါသလား? သင်က high-resolution ကိုမီဒီယာသို့မဟုတ်ကယ့်ရွေးချယ်ရေးသားအပေါငျးခငျြသလား? ဤအများနှင့်အခြားမေးခွန်းများအတွက်အဖြေကတော့ပေးခဲ့သည်ဖြေရှင်းချက်နောက်ကွယ်မှသင်တို့အဘို့ဘာ define ။ Primestream Configure လုပ်လို့ရတဲ့နှင့်အသေးစိတ်စနစ်၏ setup ကိုလုပ်မယ့် built-in စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအင်ဂျင်ကိုရှိပါတယ် - တခြားစျေးသည်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအတွက်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်း။
အဆိုပါပေးခဲ့သည်စနစ်နှင့်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များအကြားအပြန်အလှန်အမြန်နှုန်း, တည်နေရာ, လမ်းကြောင်းနှင့်သိုလှောင်မှုအလိုလိုစွမ်းရည်စဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်သိုလှောင်မှုအတွက်နှင့်နေထိုင်ရှိရာအဘယျသို့အကြားဆက်ဆံရေးကိုလည်းပေးခဲ့သည်စနစ်ကစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုတယ်တဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သိုလှောင်မှုအာကာသစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်ဒါစနစ်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖြတ်ပြီးမီဒီယာများ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အဆင့်အတန်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စရှိရာအခါဖြစ်စဉ်ဆိုထားသည်မငြိမ်သက်မှုများရှိခြင်းဆန့်ကျင်အဖြစ်ပြောင်းရွေ့ဘယ်လိုစျေးပေါသို့မဟုတ်လက်လှမ်းသိုလှောင်မှုထိုကဲ့သို့သောထပ်တူများကိုရှောင်ရှားကြသည်လမ်းနှင့်မီဒီယာမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိရရှိသွားတဲ့တိုင်းအသုံးပြုသူများ၏ရလဒ်အဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သို့မဟုတ် အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ဦးစီးဌာန။
ပေးခဲ့သည်များနှင့်သိုလှောင်ရေးနှစ်ခုမှာသီးခြားနည်းပညာများဆက်လက်တည်ရှိနေစဉ်တွင်, သူတို့ကဒါနီးကပ်စွာအသုံးပြုသူများကမရှိတော့သူတို့ကိုသီးခြားကြောင့်ဖြစ်စဉ်းစားပါကြောင်းအတူတကွချည်ထားကြသည်။ object သိုလှောင်သင့်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်သည်အတိအကျဘယ်မှာ သိ. ၏အန္တိမ abstraction ဖြစ်ပြီး, ဝေးများစွာသောလူနဲ့စတင်ကြောင်းဖိုင်ကိုဖိုင်တွဲ Workflows ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့နေဆဲနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်သတင်းအချက်အလက်ရှာ: ကဖြစ်ပြီးသူတို့လိုအပ်သောအရာကိုရဖို့တိုက်ရိုက်အဲဒီမှာသွားချင်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ကမှန်ကန်တဲ့ရလဒ်တွေကိုလိုက်လျောလိမ့်မယ်ခံစားရကြောင်း metadata ကိုသုံးပြီးရှာဘယ်မှာသူတို့သိဖြစ်စေ။
ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းကဒုတိယပေးခဲ့သည်ဖြေရှင်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်တိုးချဲ့ဘယ်လောက်ကြီးအမိန့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တင်းကြပ်စွာလိုက်နာရနျလိုအပျကွောငျးကိုဖိုင်တွဲအဆောက်အဦများတည်ဆောက်နိုင်ရန်လူဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ယခုကြှနျုပျတို့ကို virtual ဖိုလ်ဒါအသုံးပြုသူများကိုအကြောင်းအရာစုဆောင်းသူတို့ကဖြစ်ချင်ဘယ်မှာထားရန်ခွင့်ပြုအတူပေးခဲ့သည်စနစ်များကိုတွေ့မြင်ပေမယ့်ဤ "သောအရပ်တို့ကို" အမှန်တကယ်မီဒီယာမရွှေ့ပါဘူး။ သိုလှောင်မှုနဲ့ abstraction ဖွဲ့စည်းပုံမှာတစ်ရေကူးကန်နှင့်အတူအပေါ်သို့ဆောကျခဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွှာများ၏အခက်အခဲများ၏ရလဒ်ပါသောအတားအဆီးများစွာကိုဖယ်ရှားပြီ။ နည်းပညာကိုပိုပြီးရွေးချယ်စရာများကိုဆက်လက်အဖြစ်ကျနော်တို့ကမူတည်ပြီးသောဖြေရှင်းနည်းများသို့ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တည်ဆောက်ရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေ, Workflows, ငါတို့သည်သူတို့ကိုအောင်မြင်ရန်ရန်ကြိုးစားကူညီနိုငျသောအကြိုးကြေးဇူးမြားရှာဖှစောင့်ရှောက်သောကြည့်ဖို့ဆက်လက်။
ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows သိုလှောင်ခြင်း TVU ကွန်ယက် 2019-08-06
ယခင်: TSL ထုတ်ကုန်များသည် IBC 2019 ရှိ SAM-Q အသံစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းအားနောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများကိုတင်ပြသည်
နောက်တစ်ခု: Zixi: လုံလုံခြုံခြုံ IP ကိုကျော်တိုက်ရိုက်, ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးဗီဒီယိုပျ